New York (၁၇၇၅-၁၇၇၇)
၁၇၇၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သင်္ဘောဖြင့် ခရီးနှင်လာခဲ့သော ဟာမီတန်သည် ဘော်စတွန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုမှ နယူးယောက်မြို့သို့ သွားခဲ့သည်။ ဟာမီတန်သည် သူ့၏ကျေးဇူးရှင် ကုန်သည်၏ အကိုအဖြစ် အိုင်းရစ်နွယ်ဖွား ဟာကျူလီ မူလီဂန်နှင့် အခန်းအတူငှားခဲ့ကြပြီး ထိုသူသည် ဟာမီတန်အား ပညာရေးနှင့် အခြားသော အထောက်အပံ့များအတွက် ပေးချေရန် ကုန်စည်များ ရောင်းချရာ၌ အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ၁၇၇၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကောလိပ်အတွက် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် နယူးဂျာစီပြည်နယ် အဲလီဇဘက်မြို့ရှိ ဖရန်စစ် ဘာဘာဦးစီးသော အဲလီဇဘက်မြို့အကယ်ဒမီ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် လေ့လာခ့သည်။ သူသည် ကာလအတန်ကြာ အတူနေထိုင်ခဲ့သော ဒေသ ဉာဏနှင့် တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူ ဝီလီယံ လစ်ဗီးစတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် မြို့တော်ခန်းမပန်းခြံရှိ New York Commons ကပ်လျက်ရှိ ဘုရင့်ကောလိပ် (၁၇၅၆ ခုနှစ်)
ဟာမီတန်သည် မူလီဂန်တက်ခဲ့သော နယူးယောက်မြို့ရှိ ဘုရင့်ကောလိပ်(ယခု ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်)သို့ ၁၇၇၃ ခုနှစ် ဆောင်းဦးတွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၇၇၄ ခုနှစ် မေလတွင် တရားဝင်ဝင်ခွင့် မရမီထိ မူလီဂန်နှင့်အတူ ပေါင်းနေခဲ့သည်။ သူ၏ ကောလိပ် အခန်းဖော်နှင့် တသက်တာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရောဘတ် ထရု့ပ်(Robert Troup)က ဘုရင့်ကောလိပ်ရှိ လစ်ဘာတီတိုင်(Liberty Pole)၌ ၁၇၇၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဟာမီတန်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လူထုရှေ့တွင် စကားပြောခဲ့သည်ကို မှတ်ချက်ပြုပြီး ဗြိတိန်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မျိုးချစ်တွေအကြောင်း တိုတိုတုတ်တုတ် ရှင်းပြတဲ့ ဟာမီတန် ပြတ်ပြတ်သားသားဆိုခဲ့မှု၏ ကြီးကျယ်မှုအကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ဟာမီတန်၊ ထရု့ပ်နှင့် အခြားဘွဲ့ကြိုလေးယောက်တို့သည် အမည်မဖော်ခဲ့သည် စာပေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းကို ဖီလိုလစ်စီယန်အဖွဲ့အစည်း(Philolexian Society)အား ဖွဲ့စည်းနိုင်မည့် အကြိုဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။
အင်္ဂလန်ဘုရားကျောင်းတော်မှ ဘုန်းတော်ကြီး ဆင်မြူရယ် ဆီဘာရီ(Samuel Seabury)သည် ၁၇၇၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှု၏ ကောင်းခြင်းတို့ကို ရေးသားထားသော လက်ကမ်းစာစောင်အတွဲများကို ထုတ်ဝေရာ ဟာမီတန်သည် သူ၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံရေးအရေးအသားများဖြစ်သည့် A Full Vindication of the Measures of Congress နှင့် The Farmer Refuted တို့ကို အမည်မဖော်ပြပဲ ရေးသားတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆီဘာရီသည် ကိုလိုနီနယ်များအတွင် အကြောက်တရားအား ရိုက်သွင်းပေးရန်နှင့် သူ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ကိုလိုနီနယ်များအကြား ပေါင်းစည်းလာမည့် အလားအလာကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။
↑ O'Brien, Michael J. (1916). "Field Day of the American Irish Historical Society Held in New York City". The Journal of the American Irish Historical Society 1.
↑ Newton (2015), p. 64.
↑ Newton (2019), [[[:တမ်းပလိတ်:GBurl]] pp. 227–228]. "Thus, when Alexander Hamilton arrived in Elizabethtown in October 1772 and moved in with the Livingstons, they lived in this house rented from Jacob De Hart."
↑ Cornfield၊ Josh။ "Did Martha Washington Really NameaCat After Alexander Hamilton?"၊ July 7, 2016။
↑ Newton (2015), p. 69.
↑ Cardozo၊ Ernest Abraham (1902)။ A History of the Philolexian Society of Columbia University from 1802–1902။ New York: Philolexian Society။ p. 23။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလက်ဇန္ဒား_ဟာမီတန်&oldid=740265" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၀:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။